Iray volana eo ho eo raha hatontaly izany, fotoana mety hahaverezana zavatra betsaka ao an-tsaina raha tsy misy famerenana. Hirotsaka an-tsehatra hanampy ny Ray aman- dReny sy ny mpianatra amin'ny fiatrehana izany ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fa fanofanana arak'asa Rtoa Rijasoa josoa. Amin'ny alalan'ny fandaharana izay tanterahiny ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana rnm sy tvm no hanatontosany izany. Ho an'ny omaly ohatra dia ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany no nisantarany izany nanomboka tamin'ny 08 ora sy sasany maraina. Tamin'ny 09 ora sy sasany kosa no nanomboka ny an'ireo mpianatra ao amin'ny taona faharoa izany hoe samy manana ora iray avy. Tanjon'ny minisitra ny hampianatra sady hampiala voly ny ankizy. Misy amin'ireo fampianarana omeny mantsy no hampitainy amin'ny alalan'ny kilalao mba tsy hahamonamonaina ireo kilonga madinika. Hiitatra amina kilasy hafa ny fampianarana.